Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Baxrayn » Maamulayaasha Bariga Dhexe: Hogaaminta shirkad diyaaradeed sanadka 2021
Duulimaadyada Bariga Dhexe ee duulimaadka culus Thierry Antinori, Waleed Waleed Al Alawi, Abdul Wahab Teffaha
Bariga Dhexe ayaa door muhiim ah ka ciyaaray duulimaadka muddo dheer, laakiin waxay ahayd kaliya tobannaankii sano ee la soo dhaafay inay si dhab ah u hanaqaaday. Waxay beddeleysaa habka ay dadku ugu safraan caalamka, iyagoo la qabsanaya kacaanka qiimaha jaban, kuna waafajinaya baahidooda suuqa.
Heerarka duulimaadyada Bariga Dhexe waxay u keenayaan heerar cusub oo raaxo leh, adeegyo, iyo waxyaabo ay ku raaxeystaan ​​dadka safarka ah
Warshadaha duulimaadyada adduunka oo dhan waxaa si xun u garaacay COVID-19 iyo dhammaan culeysyadeeda.
5-tii bilood ee ugu horreysay sanadka 2021-ka, heerarka awoodda ayaa hoos u dhacay ku dhowaad kalabar marka loo eego heerarka safka hore ee safka.
Xogta taraafikada ee IATA bishii Maarso 2021 waxay muujisay in awoodda ay hoos u dhacday boqolkiiba 80 marka loo eego Maarso 2019. Soo kabashada ayaa dhaceysa, inbadan oo adduunka ahna waxay bilaabeen inay furmaan, laakiin wadada hortaala weli waa caqabad.
In la soo dhaafay a CAPA - Xarunta Duulista Dhacdooyinka tooska ah, Richard Maslen, Tifaftiraha Qaaradda Yurub ee CAPA, wuxuu yiri: "Lama dafiri karo hoggaanka qayb kasta oo diyaarad ah sanadka 2021, 2022, iyo xitaa wixii ka dambeeya, waxay umuuqataa mid aad uga duwan sidii hore."
Akhriso - ama dhagayso - wadahadalkan xog-warranka ah iyo waqtigiisa Duulista Bariga Dhexe Xoghayaha Guud Abdul Wahab Teffaha, Qatar General Air Carriers Organization (AACO) Xoghayaha Guud, Madaxa Isbadalka Qatar Airways Thiery Antinori, iyo Ku Simaha Madaxa Gulf Air Waleed Al Alawi.
Saamaynta COVID-19 waxay uga baahan tahay dhammaan shirkadaha duulimaadyada inay dib u qiimeyn ku sameeyaan howlahooda, hal-abuurnimo iyo la-qabsiga nidaamka cusub ee adduunka. Gudigayaga caadiga ah ee fikirka xasaasiga ah ayaa bishaan yimid bariga dhexe waxaanan ku faraxsanahay in ay nagala soo qayb galaan Mudane Abdul Wahab Teffaha, Xoghayaha Guud ee Arab Air Carriers Organization, Mudane Thiery Antinori, oo ah madaxa ganacsiga ee Qatar airways iyo Mr Waleed Al Alawi, oo ah kusimaha agaasimaha guud ee shirkadda Gulf Air. Marka waxaan u maleynayaa inay aad muhiim u tahay in laga bilaabo, in si dhab ah loo helo fahamka aagga maxalliga ah iyo sida ay ugu dhacday COVID 18-kii bilood ee la soo dhaafay. Marka Mr Abdul Wahab Teffaha, ma naga siin kartaa hordhac kooban oo ku saabsan sida bariga dhexe iyo shirkadaha duulimaadyada carabta ay ku dhacday COVID iyo sida xaaladu hada tahay.